The Pursuit of Happyness – Waa Filim Laga Sameeyey ama Jilay Qiso Dhab ah | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Macluumaad Kaa Caawin Kara in Aad ka Badbaado Xanuunka Feyruska Korona
Afrikaan.so — April 19, 2020
The Pursuit of Happyness - Waa Filim Laga Sameeyey Qiso Dhab ah
The Pursuit of Happyness waa filim laga jilay qiso dhab ah, qisadaasna qofkii daawada ama akhristay uu ku ogaanayo in noloshu aysan ahayn wax iska timaadda horumarkeedduna tahay mid dadaal dhibaato iyo rafaad badan loo maro. Si aad u gaarto meesha aad doonayso una samaysato nolol ka wanaagsan taad ku nooshahay hada.
Filimkaan waxaan laga jilay qisada Chris Gardner kaas oo ahaa nin nolosha halgan aanan la rumaysan karin kasoo maray, halgankaas oo maanta sababay in uu noqdo ganacsade iyo guubaabiye caan ah oo la garan karo.
Filimkaan waxaa sameeyay filim sameeyaha u dhashay dalka Talyaaniga ee Gabriele Muccino, waxaanna atoore ka ah Will Smith oo doorka Chris Gardener matalayay ama jilayey, sidoo kale waxaa la jilayay wiilkiisa dhabta ah ee Jaden Smith waxaanna qalanjo ka ahayd filimkaan gabadha reer Ingiriis ee Thandie Newton. Qisada filimkaan ku duugan ma’aha wax qoraal lagu soo koobi karo balse waxaan rabaa in aan dhawrka qodob ee uu ka hadlaayo filimkaani idiin la wadaago.
Sannadkii 1981-kii ayaa ganacsade Chris Gardner wuxuu maalgelin ku sameeyay dhaqaalihii uu haystay oo dhan (bone scanners) oo ah mashiinada raajada ah kuwaas oo lafaha sawir lagaga qaado, balse ganacsi gaaban kadib waxaa socon waayay ganacsigii uu dhaqaalihiisa oo dhan ku bixiyay taas oo sababtay in xaaskiisa Linda ay ka shaqeyso hoteel iyada oo ka xanaaqsan ama ka careysan qaladka uu sameeyay Chris. Xasillooni darrida dhaqaale ayaa sii kordhineysay guurkooda iyo wada noolaashadooda in uu yahay mid gabaabsi ah, in kasta oo ay wax walba ka hormarinayeen daryeelka wiilkooda Christopher Jr. oo shan sano jir ahaa.
Filimkaan wuxuu ku saabsan yahay qoyska iyo nolosha adag. Waxaa la isdhihi karaa daruufaha qoysaska kala geeyo waxaa kaalinta koowaad kaga jira dhaqaalaha. Dhacdada cajiib leh ee laga sameeyay filimkaan ayaa ah mid kusoo jiidanayso. Waa dhacdooyin kamid ah nolol maalmeedka maalin walbo. Waa sheeko run ah sida lagu sheegay filimka oo ku saabsan nin la yiraahdo Christopher Gardner. Gardner wuxuu si weyn u maalgeliyey aalad loo yaqaan “scanner density scanner”.
Gardner waxa uu isku dayay inuu iibiyo mid ka mid ah scan-yada, wuxuu la kulmay Jay Twistle, oo maamule u ah shirkada saamiyada ee Dean Witter Reynolds, balse Jay Twistle waxa uu ku mashquulsanaa Rubik’s Cube oo ah ciyaar gacmeed dhaqaale laga sameeyo intii ay ku guda jireen safarka tagsi-raaca kadib markii Jay uu ka degay taksiga, Gardner ma uusan haysan lacag uu ku bixiyo tagsiga wuxuunna doortay in uu ka ordo ama ka cararo darawalka taas oo keentay in darawalka si xanaaq leh ugu eryado xarunta BART oo ah boosteejo dadku ka safraan. Gardner wuxuu orod ku fuulay tareen balse waxaa meel kaga dhegtay iskaankiisa uu watay kaas oo uu rabay in uu markii hore iska iibiyo halkaas ayuunna kaga dhumay.
Filimkaan The Pursuit of Happyness waxaa sidoo kale laga qoray buuggaan oo noqday buuggaagta loogu iibsiga badan yahay.
Xiriirkiisa cusub Jay oo ahaa maamulihii shirkada iyo Chirs wuxuu furay fursad uu Chris kaga mid noqdo shaqaalaha shirkada. Maalin kahor waraysiga, Gardner wuxuu si cadho leh u ogolaaday inuu rinjiyeeyo gurigiisa si dib loogu dhigo in laga saaro guriga sababta oo ah dhibaato xagga bixinta kirada awgeed isaga oo ranjiyeynaya ayaa Gardner waxaa xabsiga u kaxeeyay ciidan kuwaas oo sheegay inuu bixiyo canshuurta tikidhada baabuurta ee baarkinada taas oo ku ururtay.
Gardner waxaa lagu xukumay inuu seexdo xabsiga habeenkaas, taas oo adkeynaysa jadwalkiisa wareysiga shaqada (interview) oo subaxdii ahaa. Wuxuu yimid xafiiska Dean Witter waqtigeeddii, walina wuxuu qabay dharkiisii ​​ uu guriga ku ranjiyeynayey, xalayna uu jeelka ku seexday maamulayaashii shirkada wey ka yaabeen balse wuxuu soo jiitay waraysi qaadayaasha waxaanna loo ogolaaday shaqo barasho aan mushahar lahayn uu ku joogo shirkada. Sidoo kale wuxuu ka mid noqday 20 qof oo tababar iyo tartan adagi u geli doonna shaqada shirkada.
Tababbarku ma uusan lahayn mushahar Linda oo xaaskiisa ahna kuma qanacsanayn taas oo aakhirkii sababtay in ay aado New York isagana tagto Chris iyo wiilkeedii yaraa ee Christopher. Gardner iyo Christopher waxay ku noolaayeen hoy la’aan taas oo sababtay in ay mararka qaar seexdaan musqulaha gudahooda, mararka qaarna waxa uu Chris iska shubi jiray dhiiggiisa si uu wiilkiisa lacag yar oo uu cunto ugu iibiyo uga helo, Waxaa ku yaraa saacadaha shaqadiisa oo ahaa kuwa xadidan, isaga oo ku dadaali jiray macaamiisha wicitaankoodda iyo xiriirintoodaba waanna habka kaliya ee ugu wanaagsanaa ee uu ku kasbaday shaqadiisa.
Gardner wuxuu soo saarayay dhowr qaab oo looga dhigo wax iibinta taleefanka mid wax ku ool ah, taas oo ay kujirto gaarista macaamiisha qiimaha badan.
Si kasta oo ay ahaataba caqabadaha haysta, waligiis uma muujinin duruufahiisa dadka kale intaas kadib tababarkiisii ​​lixda bilood ahaa markuu dhamaaday Gardner waxaa looga yeedhay shir uu la qaatay maamulayaashiisa. Wuxuunna helay shaqaddii uu noloshiisa oo dhan dib ugu soo bilaabay, kana samaystay ganacsiya waa weyn oo heer caalami ah isaga oo uu usoo maray rafaad iyo nolol silic badan.!
Haddaba qisadaan dhawr qodob ayaan anigu ka bartay adiguna akhriste haddii aad akhrisay qisada ama aad daawatay maxaad ka baratay ?
In qofku uu ka foggaado qoomamo iyo niyad jab, noloshu si walba oo ay u adkaato uu la halgamo, caqabadaha soo food saarrana uu rajeeyo in aad mar uun ka bixi doonto, kuunna muuqato xalka noloshaaddu in ay tahay in meesha aad rabtona in aad gaarto aanad meel ka sokaysa ku qancin.
In nolosha dhamaystirkeeda dadka inta badan ee haystaayi aysan dareemin balse qofkii ay markaas ka dhunto keliya uu garan karo micnaha iyo macaanka ku jiraayi in ay tahay in aad gurigaagga seexato kana soo kacdo adiga iyo qoyskaaga oo nabad ah si wada jir ahna ku wada cuntaysaan.
In dadka aanan lagu qiimayn dharka ay sitaan, muuqaalka wajigooda iyo meesha ay kasoo jeedaan ee lagu qiimeeyo keliya shaqada iyo oomanaanta ay guusha u qabaan iyo sida ay u qeexaan qofnimadoodda saxda ah.
In aabaha wanaagsani ilmihiisa kasoo saari karo kuwo dadka kale xusaan goortii ay arkaan sida dhaqaalaha iyo dheefta leh ee uu usoo carbiyay ilmihiisa iyaga oo aanan laga fiirinayn dhanka dhaqaalaha ama magaca ee lagu tix gelinaayo dhanka dadnimaddooda.
In shaqadu ay tahay nolosha barkeed oo aadan ka fiirin lacagta iyo dakhliga kaa soo geli kara intay tahay ee aan ka eegno intay ina kaafin karto, lagu shaqayn karo si bilaa lacag ah intii aan ku korayno jaran-jarada barwaaqada iyo baraaraha.
Qalinkii Dr. Sameer Cabdicasiis
Tags: The Pursuit of Happyness - Waa Filim Laga Sameeyey ama Jilay Qiso Dhab ah
Next post Xidigtii Instagram oo uu Xabsi Korona Ku Dhex-haleelay
Previous post Cunnooyinka Ku Habboon Bukaanada Karantiimada Ku Jira